Sat, Aug 19, 2017 शनिवार, भदौ ३, २०७४
कौशिला रिसाल आइतवार, बैशाख ३, २०७४ 1912 पटक पढिएको
प्राश्नाको विद्यालय छुट्टी छ । आज शनिबार भएकोले बुवा उठेर कतै पसलतिर पत्रिका पढ्न जानुभएछ । आमा अन्य काममा व्यस्त हुनुहुन्छ । अरू बार भएको भए आमाले प्राश्नालाई अघि नै उठाइसक्नुहुन्थ्यो । आज बिदाको दिन सुतोस् न त भनेर चाँडो उठाउनु भएन । प्राश्ना आफैं ब्युँझिएर उठ्दा बिहानको ७ बजिसकेछ । बाहिर झलमल्ल घाम लागेको थियो । उनले घडी हेरिन्, ‘ओहो ! म त कति ढिलासम्म सुतेछु ।'
प्राश्ना हतपत उठेर बाथरुम गइन् । अनि मुख धोएर भान्छामा आइन् । आमालाई भान्छामा नदेखेर उनलाई बेखुसी लाग्यो । उनी दौडिँदै करेसाबारीमा पुगिन्, ‘आमा त यता पनि हुनुहुन्न ।' उनको आँखा फूलबारीमा फुलेका फूलमाथि पुगे । उनको मुखबाट आवाज निस्कियो, ‘ आहा फूल !' सबै फूलका बिरुवामा राता, नीला, पहेँला, सेता, गुलाबी, प्याजी आदि रंगीचंगी फूल फुलेका थिए । फूलबारीमा गुरदाउली, सयपत्री, असर्फी, लाहुरे आदि फूलका बिरुवा थिए । प्राश्नाले अस्ति आमाले भनेको सम्झिइन् ।
अस्ति देखिएका सबै कोपिला फूल बनिसकेछन् । फेरि नयाँनयाँ कोपिला पनि लागेछन् । उनी खुसीले गद्गद् हुँदै आमाको प्रतीक्षामा बसिन् । आमा भान्छाको लागि चाहिने सामान सकिएकाले पसलमा जानुभएको रहेछ । केहीबेरमा नै आमा आइपुग्नुभयो । उनले आमा आइपुग्नासाथ आफूसँगै करेसाबारीतिर जान अनुरोध गरिन् । आमा पनि फूललाई पानी दिने योजनामा हुनुहुन्थ्यो।
प्राश्नाले करेसाबारीमा केही महिनाअघि आमाले धेरै फूलका बिरुवा सारेकी देखेकी थिइन् । आमालाई बेलाबेला पानी हाल्न र गोडमेल गर्न उनले सहयोग गरेकी थिइन् । अघिल्लो साता शनिबार बेलुका आमासँगै फूलबारीमा पानी हाल्न जाँदा आमाले भन्नुभएको थियो, ‘सबै फूलमा कोपिला लागेछन् । अब केही दिनमा फुल्छन् ।' आमाको कुरा सुनेर प्राश्नाले सोधेकी थिइन्, ‘आमा कोपिला भनेको के हो ? ' आमाले फूलका टुप्पामा लागेका सानासाना आकारका थुप्पालाई छोएर देखाउँदै भन्नुभएको थियो, ‘यी यिनै हुन् कोपिला । यी फक्रिएपछि रंगीचंगी फूल बन्छन् अनि त हाम्रो बगैंचा राम्रो देखिन्छ । फूल फूलेपछि मीठो बास्ना पनि आउँछ । अहिले वसन्त ऋतु हुनाले हाम्रो फूलबारीमा मात्र होइन वन, पाखा सबैतिरका फलफूलका बोटहरूमा कोपिला लागेर फूल फुल्न थालेका छन् ।'
आमाका कुराले प्राश्नालाई कहिले फूल फुल्ला र फूलबारी रमाइलो होला भन्ने खुल्दुली जागेको थियो । तर झन्डै एक सातासम्म उनी आमासँगै फूलबारीमा जाने मौका पाएकी थिइनन् । उनको स्कुलमा वार्षिक परीक्षा सुरु भएकोले उनलाई बाबाले बेलुकी केही समय पढाउने गर्नुभएको थियो ।
फूलबारीमा रंगीचंगी फूलमात्र फुलेका थिएनन् । आमाले भनेजस्तै बास्ना पनि साह्रै मीठो आइरहेको थियो । अनि पुतली, भमरा, मौरी फूलका वरिपरि डुल्दै थिए । प्राश्नाले सबै फूलहरूलाई नियालिरहिन् । फूलहरूमा डुलेका पुतली, मौरीलाई देखाउँदै भनिन,् ‘आमा किन यिनीहरू फूलमा बस्छन् ? ' आमाले भन्नुभयो, ‘हेर यी मौरी पुतली, भमरा फूलका रस खानका लागि फूलमा डुल्छन् । मौरीले यिनै फूलका रस बटुलेर मह बनाउँछन् । यी करेसाबारीको फूलहरूमा मात्र होइन ऊ हेर त भोगटे, आँप, सुन्तला, आरुबखडा, मौसम, अनार यी सबै बोटमा फुलेका सानासाना फूलमा समेत मौरी घुमिरहेका छन् ।
यी सबै फूलका रस बटुल्नका लागि यिनीहरू फूलमा डुलेका हुन् । मौरीले आफ्नो आहाराका लागि मह बनाउने हुन् तर मानिसले महलाई स्वादिलो र तागतिलो खानेकुराको रूपमा उपयोग गर्नका लागि मौरी पाल्ने गर्दछन् । यी सबै फूलका रस बटुलेर बनाएको हुनाले मौरीको मह तागतिलो हुनुका साथै औषधि पनि हुन्छ ।' प्राश्नाले सबै फलफूलका बोटमा हेरिन् । त्यहाँ सेता, राता, गुलाफी रङका फूलहरू फूलेका थिए । आहा ! बास्ना पनि मीठो आइरहेको थियो । उनलाई निकै रमाइलो लाग्यो । आमाले किन यति जतन गरेर फलफूलको स्याहार गर्नुभएको रहेछ भन्ने कुरा उनले बल्ल आज थाहा पाइन् ।
आमाले भन्नुभयो, ‘हामीले सारेका साना फूलका बिरुवा गोडमेल र मलजल गरी स्याहार गरेकाले नै यस्तो राम्रो फूल फुलेका हुन् । हामी मानिसलाई जस्तै बिरुवाहरूलाई पनि आहारा र मलजल चाहिन्छ । यी फुलेका फूलका बिरुवामा पानी हाल्नाले फूल छिट्टै ओइलाएर झर्न पाउँदैनन्, ढकमक्क भइरहन्छ ।' आमाले फूलका बिरुवामा पानी हालुन्जेल प्राश्ना सबै फूलका बिरुवा नजिक गइन् । रंगीचंगी फूलले उनको मन लोभ्यायो ।
फूलबारीको पर पुगेकी प्राश्नालाई आफ्नो काम सकेर आमाले बोलाउँदै भन्नुभयो, ‘जाऔं हिँड घरमा नास्ता खान ढिला भयो । तिमी पनि आज कोपिला छौ भोलि फूलजस्तै फुल्नेछौ ।' प्राश्नाले खुसी भएर आमाको गालामा म्वाइँ खाइन् ।
आइतवार, साउन २९, २०७४ अपरा
आइतवार, साउन २९, २०७४ संगीतमा लीन
आइतवार, साउन २२, २०७४ यार्सा जिन्दगी
आइतवार, साउन २२, २०७४ ढलमा डुबेर बाँचेकी सत्या भन्छिन् : चर्चामा आएकोमा खुसी छैन्
बिहीबार, साउन १९, २०७४ बालबालिकालाई 'अनलाइन गेम' नखेलाउन चेतावनी
आइतवार, साउन १५, २०७४ मामु बुझ्नुहुन्न
आइतवार, साउन ८, २०७४ खेलाैना खुुसी
बुधवार, साउन ४, २०७४ ग्लोबल टिचरको सकियो विद्यालयको पढाइ
भारतले अझै खोलेन सप्तकोसीको ढोका
इटहरीमा अहिलेसम्मकै ठूलो बाढी
सप्तरीमा नदी नियन्त्रणको लगानी बालुवामा पानी 593
ट्रम्प प्रशासनद्वारा दक्षिण एशियामा पहिलो पटक नेपालका लागि ५० करोड डलर स्वीकृत 9206
सतर्कता केन्द्र आफैं बेथितिको सिकार 604
चीनसँग ठोस प्रस्ताव राख्न चुक्यो नेपाल 11743
'लोकतन्त्र जोगाउन संविधान मिचेकै हुँ' 39860
प्रदेश र संघीय निर्वाचन दुई चरणमा 1390
नवनियुक्त महान्यायाधिवक्ता भण्डारीद्वारा शपथ ग्रहण 452
ऐनसँग बाझिएको 'ऋषिपञ्चमी' बिदा 13374
किन बनाउन सकेन नेपालले भारत नीति ? 2465
यसरी चल्छ गाउँमा अझै मुखियाको शासन 1229
बुद्ध धर्मबाट नेपाल र ब्राजिलको सम्बन्ध प्रगाढ 138
चार अन्‍नपूर्णकर्मीलाई शिक्षा पुरस्कार 640
काउन्सिल कार्यवाहक अध्यक्षमा पत्रकार श्रेष्ठ 732
विन्ध्यवासिनी मन्दिरको भेटी पुजारीको मुठीबाट खोसियो 5582
गोर्खामा अमेरिकी र नेपाली सेनाको सहकार्यमा स्वास्थ्य शिविर 2626
काठमाडौंमा इन्टरनेटको नीति, कानूनी प्रयोगबारे सेमिनार सुरु 263
'आर्थिक समृद्धिका लागि आइटी उद्योग बनाउन सरकार तयार' 1234
टेलिकमद्वारा कर्पोरेट युजर ग्रुप (सियुजी) सुविधालाई रिप्याकेज 1715
बाढीपीडितको उद्धार र राहतमा सामाजिक सञ्जाल 1332
वर्षाले उदयपुरमा टेलिफोन सेवा अवरुद्ध 732
बाढीपीडितलाई निशुल्क टेलिफोन सेवा 4258